RANBIR KAPOOR အမြင့်၊ အရွယ်၊ မိန်းကလေး၊ မိသားစု၊ - ဘောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ
Ranbir Kapoor အမြင့်၊ အရွယ်၊ မိန်းကလေး၊ မိသားစု၊
နာမည်အပြည့်အစုံ Ranbir Raj Kapoor က
နာမည်ပြောင် (များ) Daboo, Ganglu
မွေးနေ့ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် ၁၉၈၂
အသက် (၂၀၂၀ တွင်ကဲ့သို့) ၃၈ နှစ်
ကျောင်း ဘုံဘေစကော့ကျောင်း, မွန်ဘိုင်း
ကောလိပ် / Institutes ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စီးပွားရေး၏ H.R. ကောလိပ်, မွန်ဘိုင်း
Visual Arts, နယူးယောက်ကျောင်း
Lee Strasberg ပြဇာတ်ရုံနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံ၊ နယူးယောက်
ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်း Visual Arts ကျောင်းမှရုပ်ရှင်ပြုလုပ်ခြင်းသင်တန်း
အချစ် ရုပ်ရှင် (သရုပ်ဆောင်): Saawariya (2007)
ရုပ်ရှင် (ထုတ်လုပ်သူ): Jagga Jasoos (2017)
လိပ်စာ ပါိတောင်၊ Bandra West၊ မွန်ဘိုင်း (၅၆ KrishnaRaj၊ ပါ,ိတောင်၊ Bandra [W], မွန်ဘိုင်း - ၄၀၀၀၅၀)
ဝါသနာ ဘောလုံးကစားခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်းနှင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း
Likes / မကြိုက်ဘူး Likes: မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ ခွေးများနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ Xbox နှင့် Playstation တွင်ကစားခြင်း၊ ဘောလုံးကစားခြင်း၊ မျက်နှာကျက်တွင်ကျပန်းစိုက်ကြည့်ခြင်း
မကြိုက်ဘူး Tendli, ရိုင်းစိုင်းခြင်းနှင့်အခြားသူများ Negging
၂၀၀၈ Saawariya အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားပွဲ ဦး ထွက်
၂၀၁၀ ခုနှစ် Wake Up Sid အတွက်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင် (ဝေဖန်သူများ)၊ Ajab Prem Ki Ghazab Kahani, Rocket Singh - တစ်နှစ်တာအရောင်းစာရေး
၂၀၁၂ ခုနှစ် Rockstar အတွက်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်၊ Rockstar အတွက်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင် (ဝေဖန်သူများ)
၂၀၁၃ ခုနှစ် Barfi အတွက်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်!
၂၀၀၇ Star's Sabsey Favorite Kaun Awards မှဆော်ရာရီအတွက် Sabsey အနှစ်သက်ဆုံး Naya Hero
၂၀၁၃ ခုနှစ် Barfi အတွက်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင် (လူကြိုက်များသောရွေးချယ်မှု) အတွက်ရုပ်ရှင်ဆု။
Tattoo (s) သူ့လက်ကောက်ဝတ်မှာ ဟိန္ဒူဘာသာတွင် 'Awara' ရေးသားခဲ့သည်
အငြင်းပွားမှုများ •သူငယ်ငယ်တုန်းကသူကအရက်ဆိုင်တစ်ခုမှာညစာစားရင်းသူနဲ့တွေ့တယ် Salman Khan က အဲဒီမှာနှင့်ပါတီစဉ်အတွင်းသူတို့ Salman သူ့ကိုပါးရိုက်သောကာလအတွင်းစကားများဖလှယ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
Natalie Portman က 'Get Lost' လုပ်ရန်တောင်းဆိုခံရသည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောကြားသောအခါသူသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ သူမကသူမအားဖုန်းဆက်ပြီးငိုနေသော Tribeca ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင်သူမကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးသူမကိုချက်ချင်းရပ်တန့်လိုက်ပြီး 'ငါမင်းကိုချစ်တယ်' လို့ပြောတယ်။ သူမအလုပ်မလုပ်ခင် 'Get Lost' ပြောလိုက်သည်။
ရေးရာ / မိန်းကလေး နန်ဒီတာ Mahtani (ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ)
Deepika Padukone (၂၀၀၇-၂၀၀၉)
ကက်ထရီနာ Kaif (၂၀၁၂-၂၀၁၆)
မိဘများ ဖခင် - Rishi Kapoor (မင်းသား)
အမေ - Neetu Singh က (မင်းသမီး)
အဘိုးအဘွား အဘိုး - Raj Kapoor က
အဖွား - Krishna ဟိန္ဒူ
ဦး လေးနှင့်အဒေါ် အဖေဘက်က ဦး လေး - Randhir Kapoor က
အဖေဘက်ကအန်တီ - Babita Shivdasani
နှမ - Riddhima Kapoor ကဆာဟာနီ
ဝမ်းကွဲညီအစ်မ - Kareena Kapoor , Karisma Kapoor က
အစားအစာ အီတလီ၊ တရုတ်၊ အိမ်မှအစားအစာများကိုအထူးသဖြင့် Bhindi, Jungli Mutton, Paya
အချိုပွဲများ Mishti Doi, Creme Brulee နှင့် Gulab Jamun
သစ်သီးများ Mosambi, ငှက်ပျောသီး, ရေဖရဲသီး
စားသောက်ဆိုင် (များ) Gajalee, လိန်းရဲ့ Pavillion
သရုပ်ဆောင် (များ) ဘောလီဝုဒ်: Rishi Kapoor , Akshaye Khanna
ဟောလိဝုဒ် Dustin ဟော့ဖ်မန်း, အယ်လ် Pacino
မင်းသမီး ဘောလီဝုဒ်: Kajol , Dixit
ဟောလိဝုဒ် ဂျနီဖာ Connelly, နာတာလီ Portman
ရုပ်ရှင်များ) ဘောလီဝုဒ်: 'Shree 420'
ဟောလိဝုဒ် 'ဘ0ကလှပတယ်'
သီချင်း (များ) Kisiki Muskurahaton Pe Ho Nisaar (Anari)၊ Simon နှင့် Garfunkel မှ The Boxer၊ Channa Mereya
အဆိုတော် အေ R. Rahman က
အရောင် (များ) အနီရောင်၊ အဖြူနှင့်အနက်ရောင်
စာအုပ် ချားလ်စ် R. လက်ဝါးကပ်တိုင်အားဖြင့် Heavier သန်းကောင်းကင်
ကာတွန်း Tom နှင့် Jerry
ဘောလုံးသမား Lionel Messi
ဦး တည်ရာ (များ) နယူးယောက်၊ ယူအက်စ်အေ၊ ဗင်းနစ်၊ အီတလီနိုင်ငံရှိပလိုလီယာ
ဆပ်ပြာ la Prairie
ဒါရိုက်တာ (များ) Anurag Basu , Sanjay Leela Bhansali
ကားများစုဆောင်းခြင်း Audi A8, Audi R8, Range Rover Sport, Mercedes-Benz G63
လစာ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ရူပီး 20-25 Crore / ရုပ်ရှင်
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ရူပီး ၃၀၇ Crore (ဒေါ်လာ ၃၉ သန်း)
uyyalawada narasimha နီ၏မွေးနေ့
Ranbir Kapoor နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူသိနည်းတဲ့အချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Ranbir Kapoor ကဆေးလိပ်သောက်ပါသလား
Ranbir Kapoor ကဆေးလိပ်သောက်ခြင်း
Ranbir Kapoor ကအရက်ကိုသောက်ပါသလား
Ranbir သည် Bollywood-Kapoor မိသားစု၏ဂုဏ်သတင်းကြီးပြီးပထမမိသားစု၏စတုတ္ထမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Kapoors ၏မိသားစုသစ်ပင်
Ranbir ဟာသူ့အသက်ကိုသူ့အဘိုးဆီကရခဲ့တယ် Raj Kapoor က သူ၏အမည်ရင်းမှာ Ranbir Raj Kapoor ဖြစ်သည်။
Raj Kapoor နှင့်အတူ Ranbir Kapoor ကရဲ့ကလေးဘဝဓာတ်ပုံ
Ranbir Kapoor ကသူ့ကလေးဘဝအတွက်
သူသည်ဘောလုံးကိုသူ၏အကြိုက်ဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသည့်အရာအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအိန္ဒိယစူပါလိဂ်ဘောလုံးအသင်း Mumbai City FC ၏တွဲဖက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။
Ranbir Kapoor ရဲ့ဘောလုံးအသင်းမွန်ဘိုင်းစီးတီး
သူကလေးဘဝတုန်းကအလွန်ဆိုးရွားခဲ့တယ်။ သူကသူတို့ကိုအထဲမှာအဘယ်အရာကိုစူးစမ်းဖို့ကစားစရာကိုချိုးဖျက်ဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်မှပင်သူသည်တစ်ချိန်ကနယူးယောက်ရှိမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကိုအစောင့်များပေါ်လာသည်ကိုစစ်ဆေးရန်တွန်းအားပေးခဲ့သည်။
အတန်း ၇ တန်းတွင်သူ၌ပထမဆုံးချစ်သူရှိသည်။
သူသည်သူ၏ Kapoor အဖွဲ့မှအတန်း ၁၀ တန်းတက်ပြီးကောလိပ်ပြီးဆုံးသူဖြစ်သည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာသူအကြီးအကျယ်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့တယ် Imran Khan ဇနီး Avantika Malik ။
သူ့ဇနီး Avantika Malik နှင့်အတူ Imran Khan
သူသည်သရုပ်ဆောင်လုပ်ငန်းမစတင်မှီ Aish Ab Laut Chalen နှင့် Black ရုပ်ရှင်များတွင် Rishi Kapoor နှင့် Sanjay Leela Bhansali တို့အားကူညီခဲ့သည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်နယူးယောက်၌ ၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းသူသည်ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးဗဟိုအနီးရှိလမ်းပေါ်တွင်ရှိနေခဲ့သည်။
သူ၏ပွဲ ဦး ထွက်ရုပ်ရှင် Saawariya ရိုက်ကူးစဉ်ကလူ ၁၀၀ ခန့်သည်သူ၏သုတ်ပဝါအကအခုန်သီချင်းတွင် Jab Se Tere Naina ဖြစ်သည်။
Jab Se Tere Naina သီချင်းမှ Ranbir Kapoor
သူ၏ပထမဆုံးဝင်ငွေဖြင့် Hublot နာရီကိုဝယ်ခဲ့သည်။
သူ၏မိခင်သည်ကျန်းမာရေးမထင်မှတ်သောအရာများဖြစ်ပြီးမနက်တိုင်းသူ့ကိုကျန်းမာသောဟင်းသီးဟင်းရွက်အရည်များပေးခြင်းဖြင့် Ranbir ၏ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်သည်။
Ranbir ရဲ့ညာဘက်ပါးမှာလက်မတစ်လက်ရှည်ရှိပြီး သူငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကရေချိုးခန်းထဲကိုပြေးပြေးဝင်ပြီးအိုးပေါ်လဲကျသွားတဲ့အခါ။
သူသည်သရုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင် Jazz နှင့်ဘဲလေးအလေ့အကျင့်ရှိသည်။ သူသည်မြင်းစီးခြင်းသင်တန်းကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သူသည် Tabla အတွက် ၂ နှစ်တာသင်တန်းတက်ခဲ့ပြီးသူ၏ Rockstar ရုပ်ရှင်အတွက်ဂစ်တာတီးတတ်ရန်သင်ယူခဲ့သည်။
Wake-Up Sid ကိုရိုက်ကူးစဉ်ကသူသည်မိတ်ဆက်ရိုက်ချက်အတွက် ၆၅-၇၀ ခန့်လက်ဝှေ့သမားများကြိုးစားခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်တွင်သူ ၀ တ်ဆင်ခဲ့သောလက်ဝှေ့သမားအားလုံးသည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်လက်ဝှေ့သမားများဖြစ်သည်။
Wan Up Sid တွင်လက်ဝှေ့သမား Ranbir Kapoor ဝတ်ဆင်ခြင်း
အချို့သောတီဗီအစီအစဉ်များတွင် Ranbir သည်ဆုအချို့ကိုပြသရန်သို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်ရန်လမ်းလျှောက်ရန်အတွက်ကျန်းမာသန်စွမ်းလိုသည့်အခါတိုင်းသူသည်မိမိဝတ်စုံအောက်တွင်တီရှပ် ၂ ခုမှ ၃ ကောင်ကို ၀ တ်ဆင်ကာတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဂျင်းဘောင်းဘီနှစ်ဆအထိ ၀ တ်ဆင်သည်ကိုတွေ့ရသည်။
Ranbir သည် Baja Baarat ရုပ်ရှင် Band တွင် Bittoo Sharma ၏အခန်းကဏ္ for အတွက်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သော်လည်းသူမရရှိနိုင်ပါ။ နောက်ပိုင်းတွင်သူသည် Koffee With Karan ရုပ်ရှင်၌ပါဝင်ခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက်နောင်တရခဲ့သည်။
သူ့ကို Star Wars တွင်ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဖြစ်ခေါ်ယူခဲ့သော်လည်းငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
နှင့်အင်တာဗျူးတွင် Arnab Goswami သူဟာသူ့အဖေရဲ့အလုပ်မှာပရိသတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ့ရုပ်ရှင်အားလုံးကိုကြည့်ရှုခဲ့ဖူးပေမယ့်သူဟာသူ့အဖေမဟုတ်ဘဲသူ့အဖေမဟုတ်ဘဲသူ့အကြီးမားဆုံးလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သူ၏ရုပ်ရှင်မှငွေပမာဏအတော်များများရရှိသည့်အပြင်သူသည်အမေထံမှအပတ်စဉ်₹ 1500 / of လောက်ယူသည်။
Ranbir သည်သူသည်အလွန်မြန်ဆန်စွာပြောဆိုပြီးစားသောကြောင့် Nasal Deviated Septum ခံစားနေရသည်။
သူသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုသတိထားမိပြီးအိမ်တွင် Prada ဖိနပ်များကိုဝတ်ဆင်လိုသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် Rockstar ရုပ်ရှင်၌သူ၏“ Naadan Parinde” သီချင်းအတွက်သူသည် wigs ၂ ဒါဇင်နီးပါးကြိုးစားခဲ့သည်။
အဆိုပါသီချင်း Nadaan Parinde ခုနှစ်တွင် Ranbir Kapoor က
သူ၏အသက် ၃၀ ပြည့်မွေးနေ့တွင် Sanjay Dutt သူ့ကိုအနီရောင် Harley Davidson ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလှူခဲ့သည်။
Sanjay Dutt အားဖြင့်ပါရမီရှင် Ranbir Kapoor ကရဲ့ Harley Davidson
သူသည်သူမ၏မိခင်နှင့်အလွန်ရင်းနှီးသောကြောင့်သူသည် Mumma's Boy ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသည်။ အချို့သောအွန်လိုင်းသတင်းရင်းမြစ်များအရသူမသည်သူ၏လက်သည်းများကိုဖြတ်တောက်လေ့ရှိသည်။
Ranbir ဟာကော်ဖီဖျော်စက်တစ်လုံးဖြစ်ပြီး Espresso ၂ ခွက်ကိုနိုးပြီးတဲ့အခါမှာသောက်တယ်။ ထို့အပြင်သူသည်မိမိအ Espresso စက်ကိုသူ၏အညွန့်အပေါ်သူနှင့်အတူသယ်ဆောင်။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောကံကောင်းသည့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသော်လည်းသူသည်အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ကဲ့သို့စိတ်ခံစားမှုကောင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးမကြာခဏငိုကွေးသည်ဟုသူကပြောကြားခဲ့သည်။
Twitter, Facebook ကဲ့သို့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်သူသည်တက်ကြွစွာမရှိ။
Ranbir သည် Candy Crush တွင်စွဲလမ်းနေပြီးအားလပ်ချိန်အချို့ကိုရှာဖွေသည့်အခါ၎င်းသည်ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
2018 ခုနှစ်တွင်သူသည် 'Sanju', အိန္ဒိယသရုပ်ဆောင် Sanjay Dutt ၏အသက်တာအပေါ်အခြေခံပြီးအိန္ဒိယအတ္ထုပ္ပတ္တိဒရာမာရုပ်ရှင်၌မြင်ခဲ့သည်, Ranbir ရုပ်ရှင်ထဲတွင် Sanjay Dutt သရုပ်ဖော်ခဲ့သည်။
'Sanju' သည် 200 ကုreေအမှတ်အသားသို့ရောက်ရန် Ranbir ၏ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်လာသည်။
သူ၏အဖိုး Prithviraj Kapoor သည် Surinder Kapoor ၏ဝမ်းကွဲဖြစ်သည်။ Anil Kapoor 's ဖခင်။
။ ။ chandrashekar Rao အသက်အရွယ်
ဟိန်ဒီအတွက် naseeruddin Shah အတ္ထုပ္ပတ္တိ
သူ့မိသားစုနှင့်အတူ ruskin နှောင်ကြိုး
subramanian swamy မွေးနေ့